(Warsaxaafadeed Sawiro) Puntland oo soo bandhigtay Qasaarihii dagaalladii Suuj, Garmaan, Iyo deegaanka Dabakaran ee Gobolka Mudug. – Radio Daljir
Maarso 21, 2016 1:47 g 0
Garowe, 20, March, 2016 Dawladda Puntland oo soo bandhigtay Qasaarihii kadhashay dagaalladii shalay ka dhacay Toogga Suuj ee Garmaal ee Gobolka Nugaal iyo Deegaanka Dabakaran ee Gobolka Mudug.
Ciidamada Dawaladda Puntland ee dagaalka adag kula jirtey kooxaha sharwadayaasha al-shabaab ee kusoo duuley Puntland kuwaas oo ku dhuumaalaysanayey Togga SUUJ oo ka tirsan deegaan xeebeedka Garmaal ee gobolka Nugaal ayaa soo afjarmay maalinimadii shalay 20-March-2016-ka kooxdii Alshabaab ee degaankaasi soo gaadhay todobaadkii lasoo dhaafay.
Dagaalkaas oo bilowday subaxnimadii hore ee shalay ayaa waxa lasoo afjaray isla galabnimadii shalay, waxaana dagaalkaasi kasoo gaadhey kooxaha sharwadayaasha ah ee alshabaab qasaare naf iyo maal leh, dhimashadooda inta la’ogyahay waa 65, dhaawaca gacanta lagu qabtayn waa 5, halka maxaabiista isasoo dhiibteyna ay ahaayeen 30, waxaa sidoo kale gacanta lagaga dhigay saanad millateri oo tiro badan.
Sidoo kale ciidamada naftood hurayaasha ah ee difaacanayey diintooda, dadkooda iyo dalkooda waxaa soo gaadhey qasaare aad u yar taas oo ah 1Hal Askari oo shahiidey iyo 5 shan Askari oo uu soo gaadhey dhaawacyo, Dagaalkii kasocdey Togga Suuj-na halkaas ayuu kusoo afjarmay.
Dhinaca kale, dagaalkii u dhexeeyey ciidamada xaq kudirirka ah ee Dawladda Puntland iyo kooxaha burcad diimeedka alshabaab ee kudhexmaray maalinnimadii shalay 20-March-2016-ka deegaanka DABAKARAN oo katirsan deegaan xeebeedka Garacad ee Gobolka Mudug ayaa waxaa kooxaha sharwadayaasha ah ee shabaab waxa kasoo gaadhey qasaare aad u ballaadhan, waxaana halkaasi uga bakhtiyey 45, waxaana dhaawac looga qabtay 4, halka maxaabiista isasoo dhiibteyna ay ahaayeen8, waxaana intaa sii dheeraa oo goobta lagaga qabtay saanad ciidan oo tiro badan oo u badan hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalka ciidamada qalabka sida ee aan gabbashada aqoon ee Puntland waxaa uga shahiidey 2 askari halka dhaawacuna uu ahaa 8 Askari,dagaalkaasi weli ma uusan dhammaan saaka 21-March-2016-ka ayuu dib u bilawday khasaaraha dhabta ah ee ka dhashayna waxa lasoo xaqiijindoona marka dagaalka lasoo afmeero.
Wadarta guud ee qasaarihii iyo Jabkii soo gaadhey kooxaha sharwadayaasha ah ee al-shabaab ee ka dagaallamayey deedaanada Suuj ee Garmaal iyo Dabakaran ee Garacad ayaa shalay oo keliya waxa uu gaadheya 100 dhimasho ah, 33 maxaabiis ah iyo 14 dhaawac nolol lagu qabtay ah, taasoo u dhiganta 147 qasaare nafeed ah iyo saanad millateri oo aad u tiro badan.